ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (သိမ်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (သိမ်း)
ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (သိမ်း)
Posted by ေမာင္ ေပ on Dec 4, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 41 comments
ဘက်ကီးငတိ ကို မြင်လိုက်ရသဖြင့် ပထမ ဝမ်းသာမိသည် ။ ပြီး ဒေါသဖြစ်လာသည် ။
သကောင့်သားဆီပြေးပြီး ဂုတ်ကိုဆွဲလိုက်တော့ ငတိက စပ်ဖြီးဖြီးဖြင့် သူ ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သည့်ပုံစံမျိုး
သူ ့ကို ဆွဲခေါ်ခဲ့သော လူနှစ်ယောက်မှ စိတ်လျှော့ရန်ပြောသဖြင့် လေဆိပ်အပြင်ဘက်သို ့ထွက်ခဲ့ကြသည် ။
“ ဟေ့ကောင် ၊ ငါ့စာအုပ်တွေဘယ်မှာလဲ..ပြောစမ်း ”
“ ဟီး..အကိုကြီးကလဲ ၊ ညီလေးက ချစ်လို ့ကျီစယ်တဲ့ဟာ ၊ ပြန်ပေးမှာပေါ့လို ့၊ စာအုပ်တွေက အိမ်မှာ ”
“ ဒါဆို အခု မင်းအိမ်သွားမယ် ၊ လိပ်စာပြောစမ်း ”
ကျွန်ုပ်တို ့အဖွဲ ့သည် ထိုငတိ ကို ခေါ်ကာ သူ ့အိမ်သို ့သွားခဲ့ကြသည် ။
ငမိုးရိပ်ချောင်းနားရှိ တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးသို ့ရောက်သွားခဲ့သည် ။ အိမ်ဘေးတွင် ကားဂိုထောင် နှင့် ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး ။
စိတ်ထဲတွင် အံ့ဩနေမိသည် ။ ဘက်ကီးငတိ ကို အိမ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့် ဆိုတော့ ။
အိမ်ထဲသို ့ဝင်ဝင်ချင်း ၊ နံရံတွင် လက်ရေးဖြင့်ရေးထားသော စာစောင်စာတမ်းများ၊ပိုစတာများ ကပ်ထားသည် ကို တွေ ့ရသည် ။
ပထမဆုံးတစ်ခု ကို ဖတ်ကြည့်တော့ “ စာပေတော်လှန်ရေး ” တဲ့ ။ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ ့ရွာထဲက ဓါတ်ပုံဆရာ အင်ဇာဂီ ကို သွားသတိရမိသည် ။ ဒါနဲ ့နောက်ထပ် ထပ်ဖတ်ကြည့်သော ကင်မရာအယူအဆများ ၊ နောက်ပြီး တီဗီတစ်လုံး ဒီဗီဒီစက်တစ်လုံးနှင့် အတူ အိုးရှင်းအီလဲဗင်း ဇါတ်ကားခွေနှင့်ဟိုခွေဒီခွေများကို တွေ ့ရသောအခါ ၊ မနေနိုင်တော့ဘဲ
“ ဒါ မန်းတလေးဂေဇက်က အင်ဇာဂီ ရေးထားတဲ့စာတွေမလား ” လို ့မေးလိုက်တော့
ငတိက ဘာမှ ပြန်မဖြေဘဲ ရုပ်တည်ကြီးနှင့် လက်ပိုက်နေသည် ။
ကိုဘလက် က သူကြိုက်သော စာရေးဆရာ လက်ရာများမို ့၊ စိတ်ပေါက်ပေါက်နှင့်
“ ဟေ့ကောင် မင်းရူးနေတာလား ”
ငတိက သူ ့ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲမှ စာရွက်ခေါက်လေးတစ်ခု ကို ထုတ်ပေးပြီး
“ ဟုတ်တယ် ၊ ကျုပ် ဂေါက်နေတာ ၊ ဒီမှာ ကျုပ်ဂေါက်နေကြောင်း ထောက်ခံစာ ”
ကျွန်ုပ်တို ့အားလုံး ထိုစာရွက်ခေါက်ကို ဖြန် ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ၊ အားလားလား ဟုတ်ပဗျာ ၊ နာမည်က “ဂါအင်ဇီ” တဲ့ ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော မှတ်တမ်း နှင့် ဂေါက်နေကြောင်း ထောက်ခံထားသော စာဖြစ်နေသည် ။
ကိုဘလက် မိတ်ဆွေအရာရှိနှင့် သူ ့တပည့် နှစ်ယောက်မှာလည်း ဘာပြောဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြတော့ ။
ကျွန်ုပ်ကတော့ အခန်းထောင့်မှာတွေ ့သည့် ကျွန်ုပ် စာအုပ် အိတ်ကို ကောက်ယူလိုက်ကာ ၊ ကိုဘလက်ကို ပြန်ဖို ့ပြောလိုက်သည် ။ ထို ့နောက် ဟိုလူသုံးယောက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး ပြန်ခဲ့ကြသည် ။
သူတို ့သုံးယောက်ကတော့ “ဂါအင်ဇီ” ဆိုတဲ့ ဂေါက်သီးငတိ ကို စိတ်ရောဂါဆေးရုံကြီး သို ့လိုက်ပို ့ကြမည် တဲ့ ။
ကျွန်ုပ်လည်း စာအုပ်များပြန်ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဂေဇက်ဝင်မိတ်ဆွေများကို ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ အားလုံး ဝမ်းသာသွားကြသည် ။ ည စားသောက်ဆိုင်တွင် စားသောက်ရင်း တွေ ့ဆုံကြဖို ့ချိန်းပြီး ကိုဘလက်နှင့် လမ်းခွဲခဲ့သည် ။
အဲဒါပြီးတော့ ၊ ဂေဇက်ဝင် မိတ်ဆွေများဖြစ်သော အိတုန် ၊ ဒေါက်တာ ၊ ဦးဖက်တီး ၊ ကိုကမ်းကြီး ၊ ကိုရင်စည်သူ ၊ နီကီတာ တို ့နှင့် ကိတ်မုန် ့ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ထိုင်ဖြစ်ကြသည် ။
စာအုပ်လက်ဆောင်များကိုပေးရင်း ပျော်ပျော်ပါးပါး စကားပြောကြသည် ။ ထို ့နောက် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ လမ်းခွဲခဲ့ကြသည် ။
ဟိုတယ်ကိုပြန်နားတော့ ကမ်းကြီးလည်း ပါလာသည် ။ ရေချိုးပြီး ၊ ချိန်းထားသော စားသောက်ဆိုင်သို ့သွားဖို ့ကိုကမ်းကြီး တက္ကစီငှားနေစဉ် ကိုလင်းမြွေ ဖုန်းဝင်လာသည် ။
ကိုလင်းမြွေ က သူနှင့်အတူ သွားမည်တဲ့ ။ အဲဒါ သူ ့ရုံးကို လာရန် လိပ်စာပြောသဖြင့် သူ ့ရုံးဆီသို ့သွားခဲ့သည် ။
အားပါးပါး..သူပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်း ရောက်သွားတော့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော “ဘလိတ်ဓါး” ဟော်တယ်တွင်ဖြစ်နေသည် ။ သူ ့ရုံးက အဲဒီဟိုတယ်ရှိ ရလွှာတွင်တဲ့ ။ ကိုလင်းမြွေ က အချိန်သိပ်မရ ၊ သူ ့ကုမ္ပဏီနှင့် စီးပွားဖက် နိုင်ငံခြားသား များနှင့် ချိန်းထားသေးသည် တဲ့ ။ ယခုမှာမူ ဂေဇက်ဝင်များ တွေ ့ဆုံကြမည် ဖြစ်သဖြင့် ၊ အတူ ဆုံချင်လွန်းသဖြင့် ၊ ဟိုဘက်ပွဲကို နောက်ကြမှ ကူးမည် ဟု ပြောလာသည် ။
ဒါနဲ ့ကိုလင်းမြွေကားနှင့်အတူ ချိန်းထားသော စားသောက်ဆိုင် သို ့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြသည် ။
စားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ ညနေ ၆နာရီ၁ဝမိနစ်ကျော်ခန် ့ရှိနေပြီ ။ ကျွန်ုပ် ၊ ကိုကမ်းကြီး နှင့် ကိုလင်းမြွေ သုံးယောက်ထဲ အရင်ရောက်နေတာဖြစ်လို ့ဘီယာနှင့် စားစရာများ ကို မှာလိုက်ကြသည် ။
သုံးယောက်သား ဘီယာသောက်လိုက် ၊ အမြည်းစားလိုက် ၊ စကားပြောလိုက် နှင့် စောင့်နေစဉ် ကိုရင်စည်သူ ၊ နီကီတာ တို ့ရောက်လာကြသည် ။
ကိုရင်စည်သူ က လဲ ဘီယာကြိုက်သူ တစ်ယောက် ။ နီကီတာ ကတော့ အအေးသံဘူး ဘဲ သောက်သည် ။ ထို ့နောက် ကိုဘီလူး ၊ 77 ရောက်လာသည် ။ ခဏနေကြ ပေါက်ဖော် ရောက်လာသဖြင့် လူတော်တော်စုံသွားပြီး ၊ ဘီယာများ အဆက်မပြတ် မှာကာ ချီးယားစ် လုပ်ကြ ၊ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အခုမှ စတွေ ့ဖူးကြတာ ဖြစ်လို ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြ ၊ စကြနောက်ကြ ၊ ပျော်စရာကြီး ဖြစ်သည် ။
ကျွန်ုပ် လည်း ပြန်ရခဲ့သော စာအုပ်များ ကို လက်ဆောင်အဖြစ် ဝေပေးလိုက်သည် ။
အားလုံး တစ်ယောက် ၄ခွက်စီလောက် သောက်ပြီးသောအခါ မြူးကြွလာကြပြီး
“ တံခါးစောင့်ကြီးကို တွေ ့ချင်တယ် ၊ တံခါးစောင့်ကြီးကို ခေါ်ပေးပါ ” ဟု ဇွတ်အတင်းတောင်းဆိုလာကြသဖြင့် ၊ ကိုဘလက် ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်သည် ။ သူက အစကတော့ လာဖြစ်ချင်မှ လာဖြစ်မယ် ဟု စကားခံထားသော်လည်း ၊ ဂေဇက်က လူတွေ စုံနေကြပြီ ၊ အားလုံးပျော်နေကြပြီ ဟု ပြောလိုက်သောအခါ ၊ သူလည်း မနေနိုင်တော့ ၊ ၁ဝမိနစ်ခန် ့အကြာတွင် ရောက်လာပါတော့သည် ။ သူရောက်လာတော့ ပိုပွဲစည်သွားသည် ။
ကိုဘလက်ကား ဂေဇက်တံခါးမှူး ပီသ ပါပေသည် ။ ကျွန်ုပ်တို ့ရေးထားသဖြင့် အားလုံး ကို တစ်လုံးမကျန် အလွတ်ရသည် ။
ကြိုက်တဲ့သူ က ကြိုက်သလို မေး ၊ ဘယ်ပို ့စ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ ကို ဘယ်လို ဖွဲ ့ထားတာ ၊ ကွန်မင့် က ဘယ်နှစ်ခု ၊ ဘယ်ကွန်မင့် မှာဖြင့် ဘယ်သူက ဘယ်လို မန် ့တာ စသဖြင့် မလွတ်တမ်း ပြောနိုင်သည် ။ သဂျိုင်ခီး ပင် ကိုဘလက်လောက် ဂေဇက်ကို ဖတ်ပါ့မလား မသိ ။
ကိုဘလက်ရောက်လာပြီး မကြာမှီ ကိုလင်းမြွေ ကား နောက်တစ်ပွဲကူးရန် ရှိသေးကြောင်း အသိပေးလာသဖြင့် ၊ ဘီလ်တောင်းပြီး အားလုံး စုပေါင်းရှင်းလိုက်ကြသည် ။
ကိုလင်းမြွေ ပြန်သွားသည် ။ ခဏနေကြတော့ ကိုဘီလူး က ပြန်မှဖြစ်မည် တဲ့ ။ မပြန်လျှင် သူ ့မိန်းမ က ညစာဖြတ်လိမ့်မည် ဟု ဆိုကာ ကသုတ်ကရက် ထပြေးသွားသည် ။ ( မပြန်သေးပါနဲ ့ဦး ၊ ဒီဆိုင်မှာလဲ ထမင်းကြော်တို ့ခေါက်ဆွဲကြော်တို ့မှာစားလို ့ရပါတယ် ဆိုတာကို မရဘူး ၊ သူ ့မိန်းမဟာမှ စားတတ်တာတဲ့ ၊ သူ ့မိန်းမချက်သော ထမင်းဟင်း ကို ပြောပါတယ် )
ကိုဘလက်ကား ဝါရင့် ယမကာလုလင်ကြီးပင်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်ုပ်တို ့မှာ ဘီယာဘဲ သောက်နိုင်သည် ။ သူကား ရမ် ကို နိစ် ကစ်သည် ။ ဘယ်နှစ်ပက်မှန်းတော့ မမှတ်မိ ။ ( ကိုဘလက်ရေ ကွန်မင့်နဲ ့ခင်ဗျားသောက်ခဲ့တဲ့ ပက်ရေ ကို လာဖြေပေးနိုင်ပါတယ်နော ဟီဟိ ) ။
ည ၉နာရီခွဲခန် ့တွင် ၊ အားလုံးပြန်ဖို ့ထကြတော့ ၊ ကိုဘလက်က သူ ့ကားနှင့် လိုက်ပို ့ပေးမည် ဟု ဇွတ်ပြောလာသည် ။ ဒါနဲ ့ကိုဘလက် ကား ဖြင့် အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါး စီးကာ ပြန်ခဲ့ကြသည် ။
ကျွန်ုပ် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ၊ ယခုအကြောင်းအရာများကို ရေးတင်မည်ကြံသော်လည်း ၊ ဟိုတယ်ရှိ ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာဖောင့်မရ ။
နောက်နေ ့မနက်ကြတော့ ကိုဘလက် ရောက်လာပြီး မနက်စာ လိုက်ကျွေးသည် ။ ရန်ကုန်မြို ့တွင်း သွားလိုသည့် နေရာများ ကို လိုက်ပို ့ပေးမည် ပြောသော်လည်း ၊ ကျွန်ုပ် မှာ အခြားသွားစရာများရှိနေသေးသဖြင့် ၊ လိုက်မပို ့ရန် ပြောရသည် ။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဘလက်ရေ ) ။ ထို ့နောက် ကျွန်ုပ်အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရား သွားဖူးသည် ။ ထို ့နောက် လုပ်စရာရှိတာများ လုပ်ပြီး နေ ့လည် တွင် လေယာဉ်ဖြင့် မန်းတလေး သို ့ပြန်ခဲ့ပါသည် ။
အဆုံးသတ်ရလျှင် ၊ ကျွန်ုပ် ၏ ရန်ကုန်ခရီးစဉ်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် လွန်စွာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့သည် ။ ရွှေတိဂုံမြတ်စွာဘုရား ကို ဖူးမျှော်ရသည် ။
ရန်ကုန်ရှိ ဂေဇက်ဝင်မိတ်ဆွေများနှင့် တွေ ့ခွင့်ရခဲ့သည် ။ စာအုပ်ငတို ဂေါက်သီးဖြင့် ဆုံရသည် ။ ကျွန်ုပ် ပြောရဲပါသည် ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံယုံကြည်ကြည် ပျော်ပျော်ပါးပါးဖြင့် သောက်စားပျော်ပါးကြသော ပထမဆုံး ဂေဇက်ဝင်များ ကို လက်ညှိုးထိုးပါဆိုလျှင် ၊ ကျွန်ုပ်တို ့အဖွဲ ့သာ ရှိမည် ဟု ။
******* ကျွန်ုပ်၏ အရည်မရ အဖတ်မရ ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို ဖတ်ပေးကြသည့် အတွက် အထူး လေးစားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် *******
ဟိုက်…. ရှာလပတ်ရည်..။ ငတို့ အင်ဇာဂီကို များ ငဂေါက်လုပ်ရတယ်လို့…။ အတည်ပေါက်ရေးလာပြီးမှ ဘယ်ချော်တော်ငေါ့သွားတာလဲ….။
မောင်ရင်ပြောသည့် ဆရာဂေါက် တက္ကစီဆရာမှာ တကယ့် ဂီဂီက ဟန်ဆောင်နေတာ
မောင်ရင် လေပျံကြီးစီးပြန်လာတာ ရန်ကုန်မန ္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို ကြောက်လို့
နောက်ထပ်ဘယ်သွားမဲ့ အစီအစဉ်ရှိသေးသလဲ။ မောင်ပေ အမေရိကား သွားပြီး သူကြီးခိုင်
နှင့် တွေ့ခြင်း ဆောင်းပါးဖတ်ဖို့မျှော်နေမယ်နော်။
သဂျိုင်ခီးဆီကို လဲ လည်လည် သွားချင်ပါတယ်
အာကေ မန်းနီး တတ်နိုင်တဲ့ တစ်နေ ့ကြရင်ပေါ့
သဂျိုင်ခီး ရဲ ့မဟာနှုတ်ခမ်းမွှေး ပုံကို အနီးကပ် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာဗျ ဟီး
တီချာရီး ပါဝင်မန့်ဘီဂိုး …
ဟွန်း ….ကပေကောင်းဝူး …တားတားကို ဂေါက်သီးဖြစ်အောင်ရေးတယ်…
တားက တားတား ဇာတ်တခုမှာ သူ့ကို သေရုံလေးဘဲ နောက်တာ ကို
(ပြန်ရှင်ပေးကွာဆိုလည်း ရှင်ပေးပါ့မယ် ကျောထားလာကို ……..)
တားတားကို လက်မှတ်ရ အရူးတဲ့ ….. ကျေနပ်ဝူး …….
တီချယ်ရီး ဆုံးမပေးပါနော် …
မန်သ့်လေး က မလိမ်မာတဲ့ မေပေါင် ကို ….
အဲဒီလို တစ်ခါ မှ
စာထဲမှာပါတဲ့တစ်ယောက် က “ဂါအင်ဇီ” နော်
ငယ်ဘဝနဲ ့တိုက်ဆိုင်သွားခဲ့ရင် ခွေးလွှတ်ပါနော်
မောင်ပေ မကြွယ်နဲ့ ငါက ဓါတ်ပုံမြင်ရမှယုံမှာ
ဘာပုံ မြင်ချင်တာ တုန်း ဗျ
ဪ ..ညီဇာဂီလဲ ဂေါက်၊ ကိုဘလက်ကသောက်၊ စုံပေပေ့ဗျာ.။
ဘရားသား ရှိရင် ပိုပွဲစည်မှာ ဗျ
ညပိုင်းတွေ ့ခဲ့တဲ့ သူတွေကတော့
အဝေရာ ကို အနဲနဲ ့အများ ကြိုက်တဲ့သူတွေချည်းဘဲ
တစ်ကယ်ကို ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တွေ ့ဆုံပွဲ ညလေးပါ
ဒီမှာဖတ် ဟိုမှာသွားကြည့်၊ ပြည့်စုံပါ၏။ ညီေရေ့။
ကိုပေရေ့ ခင်ဗျားကြီးကျေးဇူးကြောင့် ဂေဇက်မိတ်ဆွေများနဲ့ဆုံရတာ အလွန်ဝမ်းမြောက်လှပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ နေ့ခင်းဖက်တွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ။ ညဖက်တွေ့ဖြစ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများ အားလုံးအလွန်ချစ်ဖို့ကောင်း၏။ ကိုပေ နောက်တစ်ခေါက်ရန်ကုန်ချီတက်ဖြစ်ရင် ကွမ်းငါးဆယ်သားလောက်ယူခဲ့ဗျာ..။
ကွမ်းငါးဆယ်သားက နည်းတာပေါ့။ ၂ ပိဿာလောက်မှာလိုက်ပါလား။ လေယာဉ်နဲ့လာတာပဲဟာနော်…
ဘရိတ်ဒါးပေါ်က လင်းမြွေက နောက်ပွဲဆက်ဘို့တောက်လျောက်
ကိုကမ်းကြီးဆိုတာကို ကျနော်မသိတော့ …………………………
ဪ…………. ကိုပေတို့များးးးးးးး ရန်ကုန်ရောက်နေတာတောင် သန်လျှင်ဘတ်ကို ကူးမလာဘူး . ငမိုးရိပ်စီးစရာမလိုပါဘူးဗျ တံတားရှိပါတယ် နောက်လာလည်ရင်ကြိုပြောနော့…
ရွှေ မင်း သား says:
ဇာတ်လမ်း ထဲမှာတော့ မင်းသားက ကိုပေ ပေါ့ ဒါပေမယ့် မင်းသမီးက ဇတ်သိမ်းပိုင်းရောက်တဲ့အထိပေါ်မလာဘူး။
ပြောတော့ ဘီဘီခွက်တွေ အပြည့်ဆို .. ဖောင်လုပ်စီးလို ့ရတယ်ဆို။ ပုံထဲမှာတော့ ရ ခွက်ပဲတွေ ့တယ်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်တဲ့နေရာ နောက်ကျောမှာ သောက်ပြီးသား ခွက်လွတ်တွေ တင်ထားတာ
စားပွဲ သုံးလုံးရှိတယ် ။ တလုံးက ကပေ သောက်ထားတာ ။
နောက်တလုံးက ရှင်စည်သူ သောက်ထားတာ ။
နောက်တလုံး က နှူးဘာ လူမျိုး ဂါအင်ဇီ အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း နဲ ့
ဒို ့ရွာသဂျီး နှူးဘာ ဒေး ကလပ် ဖွင့်ဖို ့စီစဉ်နေတာကို ဂုဏ်ပြုပြီး ဝိုင်းသောက်ထားတာ ။
ကအီးတီ… ခွက်ကတော့ နောက်တစ်ဝိုင်းမှာ
အပြည့်တင်ထားရတာ… ခုံ သုံးခုံ လွတ်နေတာက
အော်ဟော တူတို့ တော်တော်ပျော်ကြတယ်ပေ့ါနော် ..
သုံးလပိုင်းလောက် ထပ်ဆုံနှိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါဗျာ..
ဟိုကောင် မောင်ဂီလဲ ပြန်လာမယ်ပြောတယ် ။
ကျွန်တော်လဲ မရောက်ရောက်အောင်လာခဲ့ပါ့မယ် ..
လာမယ် ကျန်လာမယ် ..ဂယ် ….
ပီးရင် ..မှော်ဆြာ့ အိမ်လိုက်လည်မယ်…
ထမင်းကပ်စားမယ် ..ဒါ့ပုံကပ်ရိုက်မယ် …
တူ့ဆိုင်ကနေ တူမကောင်းကြောင်း စာတွေ တဝရီး ရေးတင်ပစ်လိုက်ဦးမယ်
ကိုပေက ကင်မလာကြီးထိုးပေးလို ့..ခလုပ်နှိပ်ပလိုက်တယ်..ကြာလို့..
ဒါ့ပုံလဲ ရိုက်ကော ထွက်ပြေးကုန်ကြကောဗျာ..သတိ္တခဲတွေ..သတ္တခဲတွေ.
လူမှောင်ခိုဂိုဏ်း ဖမ်းမိဒယ်ကြားလို့ …..သတင်းဒါ့ပုံလေး ..
ရိက်လာဘာဒယ်…. သည်မှာ သုံးပလိုက်တာကိုး …
ကပေါက်ဖော် ဒါ့ပုံရိုက်တုန်းက မူးနေတယ်ထင်တယ်။ ပုံကို မျက်နှာတွေ ကွက်ပြီး ဝါးအောင်ရိုက်သွားတယ်။ ရွာထဲက ဒါ့ပုံဆြာတွေတောင် ကပေါက်ဖော်လို ရိုက်တတ်မှာ မဟုတ်ဘူး ;P
လူရုပ်ပေါ်အောင် မနဲ လိုက်ဖမ်းနေရတယ်..မီလွယ်ပါလား..
ပေါက်ဖော် ပျော်မနေနဲ ့
နင့်ပုံ ရှိတယ် သိလား
ရန်ကုန်လာတာ အသံဖမ်းစက်ကော ၊ စပိုင်ကင်မရာ ကော
ဟား ကပေနီ တစ်ယောက်ထဲ ပစ္စည်းစုံတာဟုတ်ဖူး။ ဒေါ်တုန်က ကိုပေ့ထက်စုံတယ်။ သူ ့အကြောင်းသိတယ်ဟုတ်။
အိမ်ရှေ ့မင်းသားကို လံကြုတ်ကြတော့မယ်နဲ ့တူပါရဲ့
အော်သူတို.သိပ်ပျော်ခဲ့ကြပါလား.. အဟင့်အဟင့် သများကျတော့ခေါ်ဘူး
ကိုပေ ရန်ကုန် လာတဲ့အချိန်မှာမှ
အဘ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ချောင်းသာ ထွက်သွားမိတာ
အခုတလော တော်တော်ဆုံကြတာပဲ ။
မနေ့ကတောင် မမျှော်လင့်ပဲ ရုတ်တရက်
အဘ အပါအဝင် ၁၂ ယောက် ဆုံမိကြသေးတယ် ။
အခုပဲ Personal Mail ပို့လိုက်တယ် ။
အိုကေပါ ဦးဖောရေ ဖတ်ပြီးစာပြန်ပါမယ်နော့်။
ဓာတ်ပုံတင်မယ်လို့ ပြောတော့ ရုပ်ကလေးတော့ ဖျက်ထားပါကွယ် ဆိုလား
ဝိုးတိုးဝါးတား လုပ်တင်ရတာပါ ခင်ဗျ
ဂေဇက်နဲ့ တပတ်လောက်ကင်းကွားသွားတာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းလွတ်ပီ။ နောက်တကြိမ်လာလည်ရင်တော့ ဆုံဖြစ်အောင်ဆုံမယ်ဆရာပေရေ့။
ရမ် သုံးပက် ထည့်ပြီးသောက်လိုက်တာ
ကုန်သွားတော့ ကိုပေ တို့ ထပ်မှာပေးတာ ဘယ်နှစ်ပက်လည်း သိတော့ဘူးဗျ။
ကျွန်တော်က အားလုံးကို ပျော်စေချင်သူ ဆိုတာ အဲဒီညက ခင်ဗျား သဘောပေါက်သွားမှာပါ။
ကားပေါ်ပါသမျှလူ လိုက်ပို့ပေးဘို့ ကြိုးစားရင်း ခင်ဗျားကားပေါ်က ဆင်းပြေးသွားတာ
အခုထိ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။
ကိုပေက ဘာလို့ ဆင်းပြေးရတာလဲ
အိမ်သာတတ်ချင်တာ မအောင့်နိုင်တော့လို့နဲ ့တူတယ် နော်
နို ့မို ့ဆိုရင်
ကျန်တဲ့လူတွေ ပတ်ပို ့နေတာနဲ ့…
အချိန်တော်တော်ကြာအောင် ကားစီးပြီး အီးပါချင်တဲ့ ဒုက္ခကို မခံစားနိုင်လို ့ပါကွယ်
မောင်ပေ… ကိုဘီလူး အရင်ပြေးတာပါလေ။
နောက်ပြီး နိုင်ဂံဂျားသားမဟုတ်ပါဘူး အခြားအဖွဲ့နဲ့ ချိန်းထားပြီးသားကို မန်းဂေသားတွေနဲ့ တွေ့ချင်လို့ လိုက်လာတာ။ အဲဒီမှာ နိုင်ဂံဂျားသားတစ်ယောက်က တဂျီဂျီနဲ့ လာပါ ဖုန်းဆက်တာလေ၊ မူးလို့မေ့သွားပြီလား။
ဆုံရ မူးရ ပျော်စရာပါ။ ကိုဘလက်လည်း ဘယ်ပျောက်နေလည်းမသိ။ ဖုန်းပိတ်ထားပါသည်တဲ့။